I-Excel yaya kwiGoogle Earth, ukusuka kulungelelwaniso lwe-UTM- iGeofumadas
Ikhaya/Ukulanda/Nazo ngokugqithiseleyo, ukuze Google Earth, ukususela uqondisa UTM
UkulandaOkufumanekaGoogle umhlaba / imephu
Nazo ngokugqithiseleyo, ukuze Google Earth, ukususela uqondisa UTM
Makhe sibone ityala:
Ndiye kwintsimi ukwakha ipropati, njengoko kuboniswe kwitheyibhile elandelayo kwaye ndifuna ukuyijonga ngeso kwiGoogle Earth, kubandakanywa iifoto ezimbalwa endithathayo
Ingqiqo yethemplate yile yodwa:
Uguqula UTM izilungisoI-Geographical kwifomati ephezulu, yiyo ifunwa nguGoogle
Ikuvumela ukuba uqwalasele igama lefayili yokuya kuyo
Vumela igama le-kml ungqimba
Phinda ubhale kwakhona ifayili ekhoyo, nokuba sele yenziwe
Ivumela ukusebenzisa itekisi ze-html kwingcaciso, njengemifanekiso, ii-hyperlink, njl.
Ithemplate ikulungele ukukhethwa kwe-spheroid, siyazi ukuba kwi-Google Earth kufuneka sikhethe i-WGS84.
Kwikholam yokuqala sifaka idatha iGoogle iya kubonisa ngayo Label.
Kwezi zimbini zilandelayo zilungelelanisa i-UTM, ikhathalela ukuba inkqubo yethu ilungiselelwe ukusebenzisa ikoma kunye nenqaku njengomahluli wokugqibela okwahlulahlula amawaka. Ke ulungelelwaniso olufana no-599.157,90 aluvumelekanga ukuba lubhalwe njenge-599157.90
Kwikholamu elandelayo singena kummandla. Ngokubeka nje kumgca wokuqala, ezinye ziya kutshintshwa. Nangona zinokutshintshwa ngesandla ukuba idatha ibikumda wemimandla emibini. Ngokunjalo ne-hemisphere; Kule meko ndisebenzisa idatha evela eBogotá, ke ndisebenzisa iZone 18 kunye neNyakatho yeNtlabathi.
Kwaye ekugqibeleni inkcazo, yinto esiza kuyibona xa sichofoza kwi-Google Earth.
Indlela yokuyilayisha ezi ngqungquthela kwiGoogle Maps uze uzilandele kwiGoogle Earth
[advanced_iframe src=”https://script.google.com/macros/s/AKfycbxVLbJki_LyumjcW_IewXgNW4LZtvhQJn-ku2Y5ncCXLU_deWk/exec” width=”100%” height=”600″]
Inyathelo 1. Khuphela itemplate yokondla idatha. Ukusebenzisa umzekelo esiwubonise kwimifanekiso ongayenza khuphela le template.
Inyathelo 2. Faka itemplate. Ngokukhetha itemplate nedatha, inkqubo iza kuphawula ukuba kukho idatha engenakuqinisekiswa; Phakathi kwezi ziqinisekiso ziquka:
Ukuba iikholomu zokudibanisa zingenanto
Ukuba izilungelelwano zinemihlaba engekho yamanani
Ukuba iindawo ezingekho phakathi kwe-1 kunye ne-60
Ukuba intsimi ye-hemisphere kukho into eyahlukileyo kuneNyakatho okanye yaseMzantsi.
Idatha yenkcazo ixhasa umxholo we-html, njengalowo uboniswe kumzekelo obandakanya umboniso womfanekiso. Isenokuxhasa izinto ezinje ngekhonkco kwiindlela ezikwi-Intanethi okanye kwidiski yendawo yekhompyuter, iividiyo, okanye nawuphi na umxholo osisityebi.
Inyathelo 3. Jonga idatha etafileni nakwimephu.
Ngokukhawuleza idatha ilayishiwe, itafile iya kubonisa idatha ye-alphanumeric kunye nemephu yeendawo zendawo; Njengoko ubona, inkqubo yokulayisha iquka ukuguqulwa kwezi ngqungquthela kwifomathi yendawo njengoko kufunwa yiGoogle Maps.
Nje ukuba i-icon ikhutshwe, amanqaku abekwe kwiGoogle Street View anokujongwa kwaye ahambe phezu kwawo. Ngokucofa kwiimpawu onokuthi ubone iinkcukacha.
Inyathelo 4. Buya idatha. Ngokuzenzekelayo umthwalo wedatha ukuWGS84, njengoko usetyenziswa nguGoogle. Kodwa oku kusebenza kukuvumela ukuba utshintshe kwenye inkqubo yokulungelelanisa eqikelelweyo kwaye uvuselele imephu. Njengomzekelo, nditshintshela kwiClarke 1866 kwaye ndibona ukuba iipekethi ziphinde zacingelwa emephini.
Apha ungabona ithemplate esebenza kwividiyo.
Inyathelo 5. Khuphela imephu ye-Kml usebenzisa inkonzo ye-gTools.
Ungena kwikhowudi yokukhuphela kwaye unefayile onokuyibona kuGoogle Earth; Isicelo sibonisa apho ungayifumana khona ikhowudi yokukhuphela onokuyikhuphela ukuya kuthi ga kumaxesha angama-400, ngaphandle komda wokuba zingaphi ii-vertices ezinokubakho kukhuphelo ngalunye usebenzisa i-API yeGTools. Imephu ibonisa ulungelelwaniso olusuka kwiGooogle Earth, kunye neemodeli ezinamacala amathathu ezenziweyo.
Olunye ukhetho: Guqula ikhonkco kwifayile ye-kml usebenzisa i-Excel macro
Nje ukuba idatha yetafile igcwalisiwe, igama lefayile ye-kml kunye nedilesi apho iya kugcinwa khona ngasekunene. Kule meko kubonakala ngathi C: \_ Umsebenzi 25 X.kml
Kwimiqolo engezantsi sibhala igama lokuba ugcino luya kuba nefayile ye-kml, kwimeko: Ukuphakamisa Umsebenzi 25 X
Iziphumo zezi: ngokuchukumisa inqaku inkcazo yekholamu yokugqibela ye-Excel inokuboniswa.
Ekugqibeleni, xa sele silulungele sicinezela iqhosha elihlaza, kwaye ifayile ifanele ibe yenziwe.
Isiphumo, xa uyivula kuGoogle Earth zezi zilandelayo. Jonga igama lomaleko, njengoko silibiza njalo, kwaye ke kukho amanqaku kunye nenkcazo yalo; Ukubathinta ukubonisa iinkcukacha kuphakanyisiwe. Ukuba izinto okanye iilebhile Zikhulu kakhulu, ziyakwazi ukulungiswa kwiGoogle Earth ngokuchofoza ngakwesokudla kwiindawo zokubeka kunye nokukhetha.
Indlela yokongeza ifoto ku-kml
Oku kuyilula, cinga ukuba kwinqanaba lebhanki ye nqanaba ndifuna ukubeka umfanekiso wesitapu se cadastre, ngoko kwiseli ehambelana nencazelo engibhalayo:
Umda wePropati, iBank yenqanaba leCadastre
Ngokufanayo, ukuba ekugqibeleni ndibize iFoto, ndifuna ukubeka umfanekiso wesithotholo sendlu, inkqubo iyafana.
Ukuba ufuna ukufaka imigqa engaphezulu, yenza ikopi yabakho ekhoyo ukuze bahambe kunye nefomula.
Akukho mfuneko yokongeza iikholomu, ukuba wenza, ingayeka ukusebenza.
Kudinga ukuba wamukele ukuphunyezwa kwe-macros xa uvula ifayile ye-Excel
Ukuba ikuthumela umyalezo wempazamo, inokuba C: isikhombisi asinayo imvume yokubhala, ungazama enye incwadi enje ngo C: \_ users \_ downloads \_ ukuba nje ifolda ikhona.
Ukusuka apha unako ukulanda fayile ye kml njengoko kufanelekile.
Ukukhuphela itemplate kwi-Excel kufuna igalelo lokomfuziselo, onokuyenza Paypal okanye kwikhadi lekhredithi.
Ukuba ngaba unayo i-Geographic coordinates yohlobo lwe-Latitude, i-Longitude, kwaye ufuna ukuthumela kwiGoogle Earth, ithemplate yile.
Kungenzeka ukuba, xa usebenzisa isicelo, esinye seziganeko ezilandelayo siyakubonakala:
Iphutha le-75 - Inkqubo yefayile.
Oku kwenzeka ngenxa yokuba indlela echazwe apho ifayile ye-kml iya kugcinwa ayifumanekanga okanye ayikho imvume yeli nyathelo.
Ngokufanelekileyo, kuya kufuneka ubeke umendo kwidiski D, enezithintelo ezimbalwa kunediski C. Umzekelo:
Amaphuzu aphuma eNtshona Pole.
Oku kuya kwenzeka, ngokuba kwiifestile zethu, njengoko kuboniswe kumyalelo wethemplate ukusebenza, ukucwangciswa kwendawo kufuneka kusekwe kwiphaneli yesithili:
-Point, for separator decimals
-Coma, ngamawaka ahlukeneyo
-Coma, ukuze uhlalutye uluhlu
Ngoko ke, idatha enjengale: Iwaka elinesibhozo elinamakhulu asixhenxe anesibhozo kunye neesentimitha ezilishumi elinesibini kufuneka ibonakale njenge-1,780.12
Umfanekiso ubonisa indlela oku kulungiswa ngayo.
Lo mnye umfanekiso obonisa ukucwangciswa kwipaneli yokulawula.
Emva kokuba utshintsho lwenziwe, ifayile iphinda iveliswe kwakhona kwaye, amanqaku aya kubonakala apho ihambelana neGoogle Earth.
Ukuba unombuzo, bhalela kwi-imeyile yomhleli editor@geofumadas.com. Ihlala ibonisa uhlobo lweewindows ozisebenzisayo.
Iibhondi Umhlaba ka-Google KML
Funda AutoCAD Viewing
AutoCAD ikhosi 3D kwi ucango lwakho, ngokuba $ 34.99
Indlela yokuphakamisa izakhiwo ze-3D kuGoogle Earth
Ukuvavanya ukuchaneka kwedatha yokuphakama kukaGoogle-Yothusa!
Ukuba uthenge itemplate, bhalela kwi-imeyile yenkxaso enxulumene neposi yakho.
Ngokwesiqhelo le yile imeyile: umhleli @ geofumadas. com
Fumana uphawu APHA virker ikke. Hvor kan jeg får tak i den?
Fumana uphawu apha alusebenzi. Ndingayifumana phi?
Molo, ungabelana ngedemo okanye uvavanyo lwexeshana lwesicelo "I-Excel ukuya kuGoogle Earth, ukusuka kulungelelwaniso lwe-UTM", ngeenjongo zemfundo kuphela kwaye ngendlela endiya kukhuthaza ngayo isicelo sakho. Enkosi.
Yiya kwizakhelo zengingqi zeWindows uze ubeke ingongoma njengecala lokugqibela kunye ne-comma njenge-separator yamawaka.
Ukuba unokungabaza ubhala kwi-imeyile yokuxhaswa efike ngokuthengwa kwethemplate.
Wueber Bogado uthi:
Kwakhona kuthatha kumNxweme weNyakatho kwaye ifu ifi e-Asunción del Paraguay
Ingxaki yaxazululwa yenkxaso.
Kwakuyingxaki yokuhambelana neenguqulelo zeofisi ze-365 kunye ne-64 bits.
Okanye ingxaki yinkqubo yesithili kwenkqubo yakho yokusebenza.
Kumele uqinisekise ukuba akukho nto ingenanto, njengomhluli we-milhar, ongenanto njengoluhlu lohlu okanye njengecala lokugqibela.
Ukufumana inkxaso yokuthenga imodeli, thumela i-imeyile yenkxaso ehambelana nokuthenga.
Usebenzisa iRibas Junior uthi:
Landela iingcebiso zesayithi, faka iinkcukacha uze ubuyisele imposiso “I-Microsoft Visual Basic” Impazamo yexesha lokwenziwa “13”: Uhlobo olungahambelaniyo.
Isizathu sokuba uthumele idatha kwisibonda, kuba kuba kwiifestile zakho kufuneka wenze lo miselo:
Iphuzu, njengomhluli wewaka
I-comma, njengomhluli wenqwelomoya
I-comma, njengoluhlu lohlula.
Ukuba unokungabaza, sikuthumelele i-imeyile.
Ayenzi izibalo kakuhle, ikuthumela kwisibonda esingasenyakatho, ndiyenzile nangona idatha ezayo ngolu hlobo kwaye ikuthumela kwisibonda esingasenyakatho, kubonakala ihlaya olihlawulayo into kwaye engasebenzi, Ndiyathemba ukuba ukusombulula ingxaki.
Ukuba andizange ndifune ukubuya kwemali yam.
Ingaba uqinisekisile umzila wefayile yokuya kuyo?
Ndiqhuba inkqubo kwaye ndifumana "impazamo yexesha lokubaleka '75':
Iphuso le-76 lidla ngokudibanisa kunye nefolda ojongana nayo apho ifayile ifakelwe khona.
Ukulungele ukuba usebenzisa indlela ekhompyutheni D: kungekhona iC: kuba amaninzi unakho imvume yokubhala ngqo kwi C:
Kwakhona ingcinga efanelekileyo yokuphonononga izicwangciso zendawo yeendawo ezifana nokuhlukanisa ama-decimal kunye ne-comma njenge-separator yamawaka.
Naluphi na umbuzo ondixelela yona.
UCarlos Estopier uthi:
Sawu, ndisebenzisa i-Excel ye-Mac kwaye ndifumana ikophu ye-76
Antônio Felipe Abem Athar parente uthi:
I-Quero Excel ephakamileyo yeGoogle e-Hart vocês tem co-ordinator X yz
Ngaba unayo kwinqanaba le-Excel okanye ulawulo lweefestile lwengingqi?
Ukuququzelela inkxaso, unokuyenza kumhleli we-imeyile (kwi) geofumadas. com
Francesca Mengozzi uthi:
Ndiyabonga ngokuthumela ikhonkco. Ngoku, nantoni na ayenzayo, ungithumela kuMntla.
Ndibeka i-UTM N kuqala no-E kamva, kwaye emva koko. Ndinamawaka ahlukaniswe ngama-commas nama-decimals ngamaphupha.
Iinqununu zivela kumpuma weChile (i-19).
Nawaphi na amacebiso?
Uthunyelwe kwiposi leposi, ingxaki kukuba ubhala i-imeyile ngokungalungile,
Siyithumele kwi-imeyile echanekileyo ebhaliweyo.
Ndazihlawula kabini kwimveliso kwaye andizange ndifumane itemplate.
Ungayifumana yona kum, nceda?
Inombolo yokuthengisela i-5SV58331V3337363F
Sawn Carolina, sele sithumelele umnxibelelwano kwi-imeyili yakho. Kungenzeka kukuba uye waya kugaxekile lwakho.
Carolina Trujillo uthi:
Molo, ndiyakuxelela ukuba sele ndikuhlawulile kodwa khange undinike ithuba lokukhuphela. hlawula kwi-PayPal uye kwigama likaCarolina Trujillo kunye nenombolo yokufumana yayiyi-797849290 × 9052642
Ndithe ndathumele i-template kwi-imeyile, ndicacisa imeko yethu encinane kuyo.
Ithemplate icwangciselwe ukufikelela kwimiba ye-500.
Ukwandisa ibe ngamanqaku amaninzi, kuyimfuneko ukuguqula ikhowudi. Thumela ithemplate kumhleli @ geofumadas kwaye siya kwandisa.
Sizama ukwandisa ispredishithi, kodwa xa uvula ifayile ye .kml nge-google yomhlaba, sifumana kuphela idatha ehambelana nemigca yangaphambili yespredishithi. Sinokuyandisa njani ukuba sivelise umthamo weengongoma esizidingayo? Ngaba unomda wamaphuzu ongena kuwo?
Siyabonga kunye nokubhekiselele.
Ulungile uJan Pablo. Sithumele ikhonkco kwi-imeyile yakho, ukukhuphela. Mhlawumbi uye waya kugaxekile wakho.
Ukongezelela, sibuyisele imali yokubuyisela oyifakile.
Ukuba unomnye ukungathandabuzeki, xelela
Bandiqweqwedisa ngefayile, ndahlawula "umnikelo womqondiso" kabini kwaye andizange ndifumane ifomu.
Iphutha le-75 lithetha ukuba indlela owathathayo ayinayo amalungelo okubhala, endaweni yokwenza ngqo kwi diski C, zama enye idilesi, nokuba yipolisi okanye i disk e-E
UJean Braga uthi:
Meu ixabiso, i-alterei kwi-opção de ponto kunye ne-virgula ayikho i-painel de controle kwiifestile, ingxaki iyaqhubeka.
"Impazamo ngexesha lokwenziwa '75':
Indlela/impazamo yofikelelo kuvimba”.
Indawo okanye i-archive kml em: c: \_ Umsebenzi 25 X.kml
Qaphela: Umsebenzi ophakama 25 X
Nceda ndincede ndiyicombulule le ngxaki.
Kuphosakeleyo ukwenza iinkqubo.
Okanye i-ponto (.) I-virgula (,) isão conforme abaixo.
I-Tentei ishintshela ukunyuka kwi-mascara yenza ngcono, mas não deu certo.
Unjani u-faço ukusombulula le ngxaki?
Izindlela ezinxulumene nazo ozenzayo kwifayile, njengomzekelo
ifayile: /// C: /Users/geofumadas/Pictures/005c_got.png
Indlela elula yokufumana iindlela, uvula i-google chrome, kwaye ukusuka apha usebenzisa "ctrl + o" kwaye ufumane ifayile. Kwi-url uya kubona indlela.
Ndiyabulela kakhulu ngoncedo, sesisombulule ukuba ukungaphumeleli, nangona kunjalo, umbuzo wethu ngoku ungayifaka imifanekiso kwiindawo zendawo. Yiyiphi indlela esifanele siyizise?
Khangela ukuba kwindawo yokwakheka kwendawo yekhompyutheni, ukuba ukwahlukana kwamawaka ku-comma kwaye ukucwangciswa kwezinto eziqingqiweyo kuyona nto.
Ukuba usenokwenza iingxaki, bhalela umhleli, uthumele ifayile yakho ngolwazi olufakile.
(umhleli kwi-geofumadas. com)
Ndenza ukuthengwa le template Excel xa ibingavelisi KML lwefayile generated kodwa uququzelelo efanayo Google Earth aliveli kwi sayithi yakho, kusikhokelela ngakumbi ukuya kwinqanaba elifanayo (North Pole).
Sisekumntla weSpeyin kwaye yethu ingcinga kukusebenzisa itemplate ukufumana amanani athathwe kunye neefoto zazo.
Ngamanye amaxesha iya kwifolda yeposi engenanto,
Hlola, kwaye ukuba unengxaki ubhalele kwi-imeyile ezayo kunye nentengiso.
Mthandi, ndithenge ukuthenga nge-Paypal, kodwa andisayi kufumana i-imeyili kunye nekhonkco yokukhuphela. Lixesha elingakanani ixesha lokulinda?
Sithumele ikhonkco ngeposi. Nangona kunjalo, kufuneka uhlale ubona i-mail engenanto, ngamanye amaxesha iya khona.
Ndibe sele ndenze intlawulo ngePaypal, kodwa andizange ndifumane nayiphi na isiqhagamshelo sokukhuphela i template. Ndakhangela ugaxekile kwaye akubonakali. Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana iposi?
Sisele senze ukubuyiswa kwethemplate oyithenge kabini. Ukuba unengxaki ezininzi, masixelele.
Siphendule ngeposi. Maxa wambi uya kugaxekile, kodwa siye sahambisa unxibelelwano kuwe. Ukuba unengxaki, masixelele.
CIRILO GIRALDO SALAZAR uthi:
Kwaye ukugqiba ukuchongwa kweziganeko ezenziwe nge PayPal zi:
Nceda, ndiyathemba ukuphendula ngokukhawuleza.
Okwangoku ... enkosi
Amadoda e-geofumadas.com, ndihlawule nge-PayPal kwimveliso ethi "EXCEL TO GOOGLE EARTH FROM UTM COORDINATES" kwaye xa ukhuphela inkqubo indibuyisela kwi-PayPal, kwaye ngephutha i-$ 4.99 USD ihlawuliswe kwakhona.
Andicingi ukuba ukufumana le mveliso ebusisiweyo kufuneka ndihlawule phantse i $ 10.00 USD.
Ndixelele ukuba ndenze ntoni ukukhuphela iprogram okanye ukuba kufuneka ndilinde kangakanani ukuba bandithumela i-imeyili yam? Yintoni enokuyenza ukuze ndibuyisele inkokhelo eyongezelelweyo endiyenzayo egameni lakhe.
Hlola ugaxekile Ngamanye amaxesha uya khona. Ukuba unenkinga, bhalela kwi-imeyile evela kwi-invoyisi.
Ndithenge ithemplate kwaye andizange ndiyifumane kwi-imeyile, njengoko ndenza njalo ukuze bangithumelele, Ndiyabonga.
Hlola i-imeyile yakho ugaxekile.
Ngamanye amaxesha uya khona. Ukuba unenkinga, phendula i-imeyile eboniswe kwisiqinisekiso sokuhlawula.
carlos chorus uthi:
Ndivele ndenzile inkokhelo kwaye ifayile ayifikanga.
Shintsha umendo apho ifayile iya kugcinwa.
Ngokufanelekileyo, akusikho kwiDisk diski, kodwa kwiD disk, ekubeni kubhaliwe ukubhala C ngqo ngezinye izihlandlo.
Ndineengxaki kwi-hard drive ye-PC kwaye kufuneka ndiyitshintshe. Ndandifuna ukusebenzisa ifomu ukudlula i-UTM kwiGoogle Earth kwaye ininika umyalezo olandelayo
Iphutha le-76 lwenzeka ngexesha lokusebenza
Ngaba unokunceda uncede?
Kule meyile yakho. Khangela ukuba ngamanye amaxesha uya kugaxekile
UJan Carlos Vega uthi:
Ndibe sele ndihlawule, ndaphila i template ????
Sawubona, uJosé Luis.
Le template yenza ukuba ufake idatha ye-UTM. Unokongeza iimpawu zibe ngamadijithi ama-decimal okanye ama-degrees / imizuzu / imizuzwana.
Ewe, unokongeza imifanekiso.
Guqula uhlobo lwe icon ... akukho ekusebenzeni kwetemplate yangoku.
Ukwenza ngokwezifiso itemplate phantsi kweemeko ozilindeleyo… kubiza i-US $ 50.
hi! Ngamanye amaxesha wandinceda ndilayishe iifayile zam kwi-google emhlabeni, ndinomdla kule template kwaye ndizimisele ukuhlawula imali eceliwe, kodwa ndifuna ukucacisa imibuzo ethile:
I-1-It ingaguquleka ukuze isebenzise iidridi, imizuzu kunye nemizuzwana okanye iidridi eziphezulu.
2-Ndiyakwazi ukuguqula uhlobo lwe icon ngokucwangcisa.
I-3-Ndiyakwazi ukufaka imifanekiso ngexesha elithile.
Yintoni eya kuba yindleko ukuba ezi zilungiso zenziwe.
Siyabonga ngeminikelo yakho ,,,,,,
Qala kwakhona iphepha, kufuneka ubone ikhonkco lokuLanda / ukuthenga
UJulian Morales uthi:
Ndingathanda ukufumana le template, ithengiswa okanye apho ndingayifumana khona
unokubonisa ukuba unxibelelwano luni na ukukhuphela, andinakukufumana kwinqaku
Sebenzisa ikhonkco elikulo nqaku
Isicelo sibonakala sihle kakhulu. Ndingayilanda njani?
Ndingayilanda njani ifom ukuyibonakalisa?
Hugo Montes de Oca uthi:
Isixhobo esihle kakhulu ukuququzelela umsebenzi weofisi, ukubingelela
Kubonakala kuyisicelo esithakazelisayo, kuya kubakho ukufakazela
hello ebusuku kakuhle ingxaki endinayo yeyokuba xa eza kuqala ndiyayidala KML "Impazamo sokusebenza 75" yaye ndisenza oko ndathi ukufumana "Impazamo sokusebenza 76" Andinakwenza
Sithumele ifayile ukuze siyihlole.
Okwangoku sele isebenze kakuhle, mhlawumbi ukuba inxalenye ethile uyayifaka enye indlela.
Mikel Belasko uthi:
Ngokukodwa ke kuthetha ukuba lokuphakama 32400.000000 kunye nobude -1.000000 ° Ukusebenzisa efanayo ukulungelelanisa ukuguquka calculators, Noko ke, ndiyabona ukuba kakuhle yam yokuqala, kuba mna hlela umhlaba indawo google, i faka uququzelelo le wokubala, kwaye ndibeka kakuhle. Ndiyabonga kakhulu
Nako konke enisukuba nikwenza (Ndiye kumisa konke ukuhamba kwesishumi kwaye amawaka kunye iikoma) kusoloko uthatha ukuba Ecuador. Ubude ndicinga ukuba ndenza kakuhle, kodwa ububanzi buyi0. Ngokukodwa ndayibeka le datha UTM ED50 non wgs84 yelo Northern Spain (Navarra), kwaye ngokucwangcisiweyo kubanjelwa Gulf of Guinea.
I-Pagomotzeta 567,825.00 475,170.00 30 N
I-akhawunti yam yokuhlawula idibaniselwano idibene kwenye i-akhawunti ye-imeyile kwaye ndiyakuyixabisa ukuba uyayithumela kule dilesi ye-imeyili apho ndathumela khona umyalezo. Ndiyabonga kakhulu
Inokwenzeka ukuba, unenkathazo ngeesimboli zamawaka.
Zama ukufaka ezo zilungelelaniso ze-UTM, ngaphandle kwamaxesha okanye ii-commas ukubona ukuba ngaba le ngxaki.
Emva koko uya kwindawo yokumisela yommandla wakho kwaye wenze utshintsho. Kufuneka ukuba usebenzise i-comma njenge-separator yamawaka kwaye uluhlu lohlula; kwinqanaba njengecala lokuhlukanisa.
Ndenze ifayile kodwa xa ndiyijonga emhlabeni indithumela kwi-pole ye-N. Ndiza kukuxelela: ulungelelwaniso lwe-UTM endilusebenzisayo lwatshintshwa lusuka kwi-coordinates kwi-latitude kunye ne-longitude, kodwa usebenzisa i-ED50 datum endaweni ye-WGS84. Ngaba kufuneka ndiwadlulise phambi kokuba ndinike ifomathi ye-UTM kule isetyenziswa kwi-Excel? Kwimeko nayiphi na into, ndacinga ukuba nangona abazange bahambelane, ukuhlukana kwesigaba akuyi kuba phezulu kakhulu, kuba ukuba ndithelekisa ezinye izilungelelaniso endizisebenzisayo kunye ne-ED50 kunye nezifanayo kwi-WGS84 (zivela eSpain), umehluko wesigaba. ziimitha ezimbalwa, kodwa kwimephu ndicinga ukuba awuboni nto, nditsho neeleyibhile ezikuluhlu “lweelebhile”. Nawuphi na umbono apho ndiya kuphosakala? Amanyathelo kunye nefomathi yesishumi ibonakala ichanekile (ummandla ngama-29 akunjalo?).
GLORIA DOMINGUEZ uthi:
Disemba, 2012 kwi
Ndanibhalela lokuguqula ukusuka geográicas ukuya UTM, kodwa akukho ngxaki ifayile ukujikelezisa lwefayile ukuya ku Google ngokwayo ivelisa ifayile kodwa zonke iingongoma ezishiywe zilungelelanise 180grados 0minutos 0.00Segundos North Latitude 74 degrees imizuzu 0 no 0.00 imizuzwana IWest kwakhona ayibonisi iphuzu kwimaphu. Ndiyayixabisa ukuba unokunceda. Gloria Domínguez.
Hlola i-imeyli yogaxekile, ngamanye amaxesha ikhonkco lokukhuphela i-template iya khona
Nceda ndiqinisekise ukuba kutheni andizange ndifumane itemplate ukulanda kwiifayile zomhlaba zeGoogle, i-passographic geographic coordinates ukuya ku-UTM xa ifike. Ndiyabonga GEDL
Asizange sizame ngokucacileyo kwi-Mac IOS.
Enkosi ngokuphendula, ndiyenzile le ubundixelela yona. Ingxaki yaqhubeka, nangona kunjalo, emva koko ndinike igama kwakhona ifayile ye-kml yokuthunyelwa ngaphandle kwaye yaba ngcono. Ndiyabulela ngenkxaso yomhlobo wam, ndatshintsha ukusuka ku-“\_SIMV\_MAPAS.000.000.000.kml” ndaya ku-“\_SIMV\_MAPAS\_programa.kml”. Ngoku ayisiyithumeli kwisiqulathi seefayili esithunyelwa ngaphandle kodwa ekugqibeleni ifayile yenziwe, ihlala kulawulo olufanayo apho i-spreadsheet egqwesileyo ikhoyo.
Ndiyathemba ukuba unokwazi ukubona iphoso, ndisebenze kakuhle kwiifestile kodwa ngoku ndisebenza kuMac kwaye apho siya khona, ukuba unayo nayiphi na iindululo ndiyakuyixabisa. Siyabonga kwakhona
Zama ukusebenzisa igama kunye nendlela elula, umzekelo:
Qinisekisa ukuba unelungelo lokubhala kule fayili, uzama ukudala ifayile apho kwi-browser.
Ndizama ukusebenzisa i Mac, uthi xa uqalisa "Impazamo yenzekile '52' sokusebenza, igama okanye inombolo ifayile engalunganga."
Inginika ezine iindlela zokukhetha, owokuqala ungasebenzi, ndingakwazi ukukhetha kuphela naziphi na ezintathu zokugqibela:
1 Qhubeka 2. Ukugqiba i3.Depuración 4.Help
Ndikhetha ukuPhukisa nokushiya iwindi ethi:
I-Sub generateKML ()
'Yenza iKML Macro
'IMacro ihlelelwe iGeofumadas
Kufuneka uyiguqule ibe yifom ye-kml
Unokwenza oku nge gvSIG okanye nayiphina inkqubo ye-GIS
antonio becerril uthi:
Ndifuna ukulayisha umdwebo we-dwg kwi-google yomhlaba, njengoko ndenzayo, umzobo yi-axis yendlela ehamba ngayo
C: / imephu /
Eyona nto isebenzayo kukuba kwisikhangeli se-Intanethi, khangela idilesi ukuze ubone indlela, kuba ukuba unegama lendlela enendawo engenanto enje: "amaxwebhu am", kufuneka uyibhale njengoko ibonakala kwisikhangeli. url.
Jorge Echeverria uthi:
Molo, ungandinceda?Ndifumana "Execution error 75" ndinike imizekelo ye "routes" zokwenziwa kwefayile ye kml ngo. umzekelo wamaxwebhu am okanye kukhutshelwa okanye kwidesktop. Enkosi.
Hlola i-imeyli ye-SPAM, ngamanye amaxesha kukhokelela umyalezo ozayo kunye nekhonkco yokukhuphela ngqo.
Kukho nawuphi na, siye sithumela ngqo kwi-imeyile yakho.
Ndenze inkokhelo nge-paypal kodwa ifayili ayizange ilandwe, ukuba idinga id. Ndiyithumela kwintengiselwano.
Indlela yodwa esinayo, isebenzisa i-PayPal okanye i-debit / ikhadi lekhredithi elihambelana ne-PayPal.
UJOSE RIVERA CABALLERO uthi:
Ndifuna ngokukhawuleza ukufumana isicelo se-Excel kwi-Google Eaarth, kodwa ndinekhadi lokukhwabanisa kuphela.
Yintoni endiyenzayo ukuba ndiyenze, ukuba ingaba naluphi uqhagamshelwano ePeru, ukwenza ukutshintshwa kwebhanki?
Nceda, ndiyifune isicelo nge-URGENCY.
UJosé Rivera -Lima, PERU.
Ndithumele idilesi yesithombe osisebenzisayo ukuyivavanya kwaye ubone oko kwenzekayo.
Ngamanye amaxesha iba ngumbuzo wokuba indlela ayakhiwanga kakuhle. Enye indlela yokubona ukuba injani loo ndlela kukuvula ifayile yefayile kwisikhangeli, ucofa ekunene emfanekisweni kwaye ukhethe ukuvula nge ... kwaye ukhethe isikhangeli; ujonge indlela engentla.
Ndizama ukufaka isithombe kwisimo sendawo kodwa asisebenzi, xa ndifaka isivakalisi njengoko ubonakalisa, ifoto ifakwa ngokwahlukileyo kwaye kungekhona njengenxalenye yecandelo lephuzu. Kwakhona xa ndizama ukubonisa umfanekiso kuphela isakhelo siphume kodwa asikho isithombe.
Khangela kwithebhu ukuba ndidibene.
Ukuba awukho, ungandibhalela editor@geofumadas.com
kwaye senze ukuqesha.
Sawubona Umhleli, ndifuna ukuthetha nawe ngesithempulethi endithengisayo, ngaba unako ukuya kwintetho?
Ewe, ngokwenza okufanelekileyo ukuyivula ngeprogram ye-GIS kwaye uyithumele kwi-kml.
Ukuba ayinakuphazamiseka, thumela kwi-imeyile yam kwaye ndiya kukuxelela ukuba ndiyakunceda, kuba ndiyabona ukuba yeyiphi ifom itafile.
Umphicothi-zincwadi akayiqondi into oyithethayo
Ndingalufumana phi uncedo lomntu kumphicothi zincwadi ... ndiludinga ngokungxamisekileyo uncedo lwakho, akunamsebenzi nokuba kuyabiza na, enkosi.
Ndiyaxolisa ukuba zifomathi ezigqwesileyo, amanqaku angaphezulu kwe-600 endikhoyo.
Inqaku lomdla: i-Actán izitishi
I-Latitude: Ubude be20.654443: -103.377499
Eziphezulu: (20.662213, -103.372706) (20.662213, -103.382293) (20.654444, -103.387087) (20.646674, -103.382293) (20.646674, -103.372706) (20.654444, -103.367912)
Yile nto ndifuna ukuyiguqula ibe ngamanqaku anomdla kuhlobo lomhlaba kaGoogle, into kukuba kukho amanqaku angaphezu kwama-600 enomdla endifuna ukuwakhupha kwifomathi ye-kml? Andazi ukuba uyacacisa ...
Sinike umzekelo wendlela idatha yephuzu ngayo, kwaye yiyiphi ifomethi.
Molo ... uxolo ndiyafuna ukuguqula ifayile epheleleyo yamanqaku anomdla kunye nolungelelwaniso lwayo kwifomathi ye-kml ukuyibona kuGoogle emhlabeni ... umntu angandikhokela, enkosi.
I kwakhona yaye ngokuqinisekileyo ekunene bangene locale kufuneka ibe kwindawo njengomahluli wokugqibela, umahluli isiphumlisi kunye isiphumlisi amawaka njengomahluli nilungele.
Ulungele, sibulele ngegalelo!
Ndiyihlolisise kwaye kulungile, ndithumele efanayo kwi-Indonesia.
Kubonakala ukuba kukho ukuphikisana phakathi kweeyunithi ze-Excel kunye neeyunithi apho zithunyelwa khona.
Uyabona ukuba kwipaneli yokulawula, izicwangciso zesithili. Khangela ukuba le ngongoma ihlukanisa i-decimals kunye ne-comma separator yewaka kunye ne-comma kwakhona i-separator yezintlu.
Ndabhala njengoko babonisa:
I-792713.85 kwi-X ilungelelaniso
1127836.33 kwi-Y yokulungelelanisa
Kwaye kukho iwindi ithi:
“Impazamo yexesha lokusebenza '13' yenzekile.
ukugqiba, ukuphazamisa okanye ukunceda.
Kufuneka ubhale idatha kwifomu:
Zama Ngenxa yokuba ithemplate kufuneka iqwalasele ii-commas ukuba zihlukanise amawaka kunye namanqaku ukuba ahlule i-decimals; Umele usebenzise oko.
Ezi zidibaniso zam,
I-VD-0 792.713,85 1.127.836,33 19 N
I-VD-1 792.680,07 1.127.822,15 19 N
I-VD-2 792.528,78 1.127.833,33 19 N
I-VD-3 792.301,83 1.127.895,05 19 N
I-VD-4 792.191,63 1.127.895,05 19 N
kwaye xa ndiyenza le nkqubo, thumela e-Indonesia kwaye ezi ngqungquthela zivela kwiRiphablikhi yaseBolivia yaseVenezuela, naziphi na iziphakamiso?
Yorodis Ramírez uthi:
Yonke imibuzo yam iphendulwe .. !!
Elías González uthi:
Sula i mpazamo:
Ixesha lokubaleka lempazamo '75':
Impazamo / Indlela yokufikelela yeFayile
Kungenxa yokuba ndayekezela ukufikelela kwiyunithi yeC: ukutshintsha indlela eya kudala ngaphandle kwengxaki. Ndiza kuzama ukwenza owenza iipoloni.
Ubangena kwi-backwards, yabona ukuba i-oda lakho liMntla, i-East (Lat, Long)
ngelixa kuthemplate likwimeko yoMpuma Wempuma (Ede, Lat).
Kumele ususe ama-commas, ukuze afakwe njengamanani.
Ndiye ndavavanya kwaye iwa phantsi kwindawo yakho, zama kwakhona uze undixelele.
Ndicinga ukuba kuya kufuneka ndiyenze ukuhlaziywa ukwenzela ukuba umyalelo wee-coordinates ulandelelwano, ixesha elide eliqhelekileyo lisetyenziswa ngokuqhelekileyo.
Apha ndishiya ezinye iinqununu ezithathiwe kwintsimi kwiRiphabhliki yaseDominican kunye neeramitha ezilandelayo:
Xa ndizama ukuyilayisha bawa eMzantsi Melika.
Ndiyabulela kusengaphambili .. !!
Ndicebisa ukuba ubuyekeze oku kulandelayo:
Khumbula ukuba orthophotos ze Google Earth abantu abafudukayo, isahlukile ezahlukeneyo. Ngoko ke ukwenza zilungelelanise ukuba uyazi, le template, khangela neququzelela ibonisa Google Earth, ukuze abone ukuba iyavumelana ukuba zisuka kwi template kunye Datum WGS84.
Yintoni enomdla wokuqinisekisa ukuba ulungelelwano olufanayo, hleze lunephutha lokubala.
Ukuba ulungelelwano lufanisana, kodwa lukhutshwe kwisithombe, kunokuthi iphutha lisuka kumfanekiso. Ngaliphi na indlela ndincoma ukuba uphawule iimpazamo ozifumanayo, kuba ithemplate endiyenzela ukusetyenziswa kwamahhala kodwa ndifuna ukuba ndondle ngokujonga.
Isinyathelo esilandelayo siza kuvelisa i-polygon, siya kubona kwelinye inqaku.
Ukubeka iindlela kwi-directory yendawo, khangela le nqaku
Kucinga ukuba ifayile isesikhundleni C: /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, ngoko ikhowudi iya kuba:
Ingakanani ukufuduka kwindawo yakho ye-19?
Ukuba ungangibhalela i-coordination, ukuyiqinisekisa.
Kubonakala ngathi awunalo ilungelo lokubhala kwi-C lwemibhalo:
Zama indlela phakathi kwamaphepha amsebenzisi.
Uqinisekile ukuba usebenzisa iWGS84?
Hlola, andiyazi ukuba inkqubo yelizwe lakho inokwenza oku buxoki.
Ukutshaya, kuba ukuze ubhale malunga nale micimbi kufuneka utshaye i-cigar yentsangu ... Hehe.
UMarcos Diaz uthi:
Ndiyabonga ngegalelo .. EXCELLENT .. !!
(Kutheni i Geofumadas ??)
Ndenza inkqubo ukulayisha iifoto ukusuka kulawulo lwengingqi kwaye ayikwazanga sigqibe ngokwanelisayo, akwazi ukuba achaze ngakumbi malunga nendlela yokwenza oko ngale ndlela kuba ukuba Ndabaleka ukuya iifoto ukusuka weefayili web.
Ndaphinda ndifake i-coordinates kwi-19N Zone kwaye idatha yawa phantsi ngokupheleleyo.
Ndiyabulela inkulungwane .. !!
Wander Santana uthi:
Omhle mva uGabriel,
Kwisihlomelo sam UTM, kunye ne-19 kwinqanaba leNyakatho yeNtlabathi, ngokukodwa kwiRiphabhlikhi yaseDominican, iyawa yashiya yindawo yomibini kunye nezo zidibeneyo. Ndaphinda le nkqubo kwiihlandlo eziliqela, idatha eyahlukileyo kunye nomphumo kwakufana. Ndiyabulela kusengaphambili ukuba ndiza kuba nexhalaba lam.
Ndiya kucinga ngako, ndicinga ukuba yiyo yinguqulo ye2 yale template, njengaye senza lowo othumela amanqaku kunye namaphuzu kwi-AutoCAD
Ingaba kuba kufuneka siqale ukuvelisa iifayile ezingenanto?
Ndiza kuzama ukuqonda ukuba zisebenza kanjani ii-macros, kuba kubonakala kum ngathi, kuya kuba lula ngakumbi ukuvelisa ipoligoni kunye neezitshixo ezifakiweyo. Ngokuzithoba …
Indlela yokungenisa izilungiso kwiGoogle Earth